SAWIRO: Madax Wayne Bartomeu Oo Tababarkii Galabta Ee Kooxdiisa Goob Joog U Ahaa Iyo Miyay Valverde Kawada Hadlayeen Saxiiyo Cusub Oo Neymar Ku Jiro? - Gool24.Net
Madax waynaha kooxda Barcelona ee Bartomeu ayaa tababarkii labaad ee kooxdiisu maanta qaadatay goob joog u ahaa isaga oo galabnimadii ka soo muuqday tababarkii uu Ernesto Valverde ku bixinayay Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Madax wayne Bartomeu ayaa la arkayay isaga oo xarunta tababarka kooxdiisa kula sheekaysanaya tababare Valverde isla markaana ciyaartoyda kooxdiisa gacan qaadaya gaar ahaan ciyaartoyda da’yarta ah iyo saxiixyada cusub.
Bartomeu ayaa wali ka shaqaynaya sidii uu kooxdiisa ugu soo celin lahaa Neymar Jr lamana oga haddii ay Valverde ka wada hadlayeen halka uu marayo hawgalka ay Neymar ku doonayaan.
Laakiin sidoo kale Bartomeu iyo maamulka kooxdiisa Barcelona ayaa ka shaqaynaya in ay la soo wareegaan difaaca kooxda Sevilla ee Junior kaas oo ay doonayaan in ay Liverpool iyo Man United uga horeeyaan.
Dhinaca kale tababare Ernesto Valverde ayaa ka hadlay saddexda saxiix ee ay kooxdiisu Barcelona xagaagan samaysay ee kala ah Frenkie De Jong, Antoine Griezmann iyo goolhaye Neto oo badalay Cillessen oo kooxda Valencia ku biiray.
Xarunta tababarka Ciutat Esportiva Joan Gamper waxa uu Valverde ku haystaa in badan oo ciyaartoyda kooxdiisa kowaad ah kuwaas oo haddaba diyaar garow adag ugu jira xili ciyaareedka cusub.
Waxaa la arkayay Frenkie De Jong oo si dhaw ula shaqaynaya isla markaana la sheekaysanaya xidiga ay khadka dhexe ku midoobi doonaan ee Sergio Busquets.
Tababare Ernesto Valverde oo ka hadlaya saxiixyada cuusb ee kooxdiisa ayaa yidhi: “Iyagu waa saddex saxiix oo muhiim ah waxaananu rajaynaynaa in aanu ka soo saarno waxa ugu badan. Waxaanu ognahay in ay farxad ka dhex abuureen taageerayaasha”.
SIDOO KALE AKHRISO: Real Madrid Oo Qarka U Saaran Saxeexeedii LIXAAD Ee Xagaagani, Booska Uu Ka Xoojin Doono & Lacagta Uu Ugu Soo Wareegayo.
Valverde ayaa maalmihii ugu danbeeyay tababar adag siinayay ciyaartoyda kooxdiisa ka hor inta ayna u duulin dalka Japan halkaas oo ay laba kulan oo saaxiibtinimo kula ciyaari doonaan Chelsea iyo kooxda Vissel Kobe ay ciyaartoydii hore ee Barca ka tirsan yihiin ee Andres Iniesta iyo David Villa.
Jadwalka Kulamada Saaxiibtinimo Ee Uu Valverde Kooxdiisa U Diyaarinayo.